Ukusekela Technical - Lanlin Printech
Thina uzinikezele ukuphendula isidingo amakhasimende 'noma nini nanoma kuphi, ungahlala uxhumane nathi at esivumelana nawe ngocingo, i-imeyili, Skype noma ezinye izindlela.
Isazi lobuchwepheshe yethu onjiniyela angathanda ukukunikeza isevisi ngokushesha ngangokunokwenzeka. Nokho, ukuze ahlinzeke kangcono inkonzo yakho bese uthola inkinga ixazululwe, sicela usithumelele i-imeyili ukweneka ulwazi iphrinta ngokugcwele ngaleso informations ipuleti, izithombe, nesiphambeko.
Shenzhen Lanlin Printech Co., Ltd ka- ukuqeqeshwa sites zitholakala eChina, futhi unikeze ukufinyelela kuzo zonke amaphrinta. Abaqeqeshwayo bayakwazi ukuthola izandla-on isipiliyoni kanye iphrinta, ukufunda yesondlo eziyisisekelo kanye nokusebenza endaweni ephethwe.
Uma ukwazi ukusisiza ukuthola i-visa futhi angathanda bathwale izindleko abathintekayo like amathikithi endiza, indawo yokuhlala zendawo, njll, singathumela uchwepheshe wethu esikhundleni sakho, futhi ukukunika ukufakwa khulula nokuqeqeshwa inqobo njengoba wazi kanjani ukuba yingxenye yaso.
Uma namanje unganelisekile izinkonzo ezenziwa abasabalalisi zendawo, sicela uxhumane nathi.